Isiqalile iWimbledon nemiphumela eminingi ethusayo - Bayede News
Liyahloma eBaqulusini lingahle lidle abantu
EMVENI kokwenzeke osukwini lokuqala uCori Gauff emangaza abaningi ehlula uVenus Williams, kuningi obekubhekwe osukwini lwesibili kuWimbledon. Udadewabo kaVenus uSerena Williams uwuqale kahle umqhudelwano ehlula uGiulia Gatto-Monticone odabuka e-Italy okleliswe endaweni yama-164 ngo-6/2, 7/5. Udlulele esigabeni esilandelayo ngaphandle kwezinkinga. Okuphinde kwamangaza abaningi ukuphuma kukaMaria Sharapova odabuka eRussia emzuliswaneni wokuqala ngesikhathi ewushiya phakathi umdlalo ekhala ngokulimala, ngaleyo ndlela uPauline Parmentier odabuka eFrance okleliswe endaweni yama-88 wadlulela phambili. Okleliswe endaweni yokuqala kwabesifaze u-Ashleigh Barty odabuka e-Australia udlulele esigabeni esilandelayo ehlula uSaisai Zheng odabuka eChina ngo-6/4, 6/2.
Ovikela isicoco seWimbledon u-Angelique Kerber odabuka eGermany okleliswe endaweni yesihlanu uhlule umkhaya wakhe uTatjana Maria ngo-6/4, 6/3. UGarbine Muguruza oweyenqobe lesi sicoco ngowezi-2017 uphume zibekwa nje ehlulwa uBeatriz Haddad Maia odabuka eBrazil ngo-6/4, 6/4.
Kwabesilisa kube yinto efanayo njengoba uDominic Thiem odabuka e-Austria ehlulwe uSam Querrey odabuka e-United Sates of America ngo-6/7 (4/7), 7/6 (7/1), 6/3, 6-0. UJo-Wilfried Tsonga uhlule uBernard Tomic ngo-6/2, 6/1, 6/4. Okeliswe endaweni yesibili yiWimbledon uRoger Federer odabuka eSwitzerland akazange abenankinga ehlula uLloyd Harris odabuka eNingizimu Afrika okleliswe andaweni eyama-88 ngo-3/6, 6/1, 6/2, 6/2. Omunye oyimfivilithi uKei Nishikori odabuka eJapan okleliswe endaweni yesi-8 uzidlele amahlanga kuThiago Monteiro ngo-6/4, 7/6 (7/3), 6/4. UNadal odabuka eSpain okleliswe endaweni yesibili uzidlulele kalula ehlula uYūichi Sugita odabuka eJapan ngo-6/3, 6/2, 6/3.
Izingane eziphebezayo zithole inqabakutholwa yethuba
UKevin Anderson (Reuters)
Namhlanje kuzobe kubhekwe uNovak Djokovic odabuka eSpain okleliswe endaweni yokuqala ukuthi enze kahle esebhekene noDenis Kudla odabuka e-United States of America. UKevin Anderson wakuleli okleliswe endaweni yesine uzodlala noJanko Tipsarevic odabuka eSerbia.
Bayede News Jul 3, 2019